ဘဂျီးပုအမျိုး ထန်းရေအမူးကောင်းလို့ drunk | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » U.S. News » ဘဂျီးပုအမျိုး ထန်းရေအမူးကောင်းလို့ drunk
ဘဂျီးပုအမျိုး ထန်းရေအမူးကောင်းလို့ drunk
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 31, 2012 in U.S. News | 21 comments
ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားက အမျိုးသမီးတဦးခမျာ ရေထဲက ဘဲရိုင်းအုပ်ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ရေစီးသန်လှတဲ့ချောင်းထဲ ခုန်ချခဲ့လို့ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ဖြစ်စေမှု အပါအဝင် ပြစ်မှုများနဲ့ စွဲချက်အတင်ခံနေရသည်။ ဂျက်စတင်းနား လန်နီယူးစကီးဟာ တင်္နလာနေ့ ညနေတုန်းက ဂလန်းရော့ခ်ဒေသ ကောဒိုရပ်စ်ချောင်းအတွင်း ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး လေးနှစ်သားအရွယ် ခလေးကပါ အမေနောက်လိုက်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ အိမ်နီးခြင်းတဦးက ခလေးငယ်အား တားဆီးခဲ့ရပြီး လန်နီယူးစကီး ၄၁နှစ်ကို လည်ပင်းအနက်ရှိ ရေထဲမှ ကယ်တင်ဖို့ မီးသတ်သမားရှစ်ယောက် အသုံးပြုခဲ့ရသည်။ သူမအား ဆင်ခြင်တုံမဲ့ အန္တရာယ်ပြုမှု၊ ဥပဒေ မလိုက်နာမှု၊ မူးရစ်ရမ်းကားမှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။ လန်နီယူစကီးက ရေထဲချော်ကျသွားတာသာ ဖြစ်ကြောင်းဆိုပေမဲ့ ရဲအဖွဲ့၏ အသက်ရှုလေမှုတ် စစ်ဆေးချက်တွင် ကားမောင်းရန် သတ်မှတ်နှုန်းထက် အယ်ကိုဟောလ်ပါဝင်မှု နှစ်ဆမက ပိုထားသည်။
ဘဲအဖမ်းကောင်းလို့ဘကြီးပု အမျိုးပြုတ်တော့မလို့ 
ယူအက်စ် ဥပဒေက တမျိုးပဲနော်…
ရေထဲက ဘဲရိုင်းအုပ်ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ရေစီးသန်လှတဲ့ချောင်းထဲ ခုန်ချခဲ့လို့ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ဖြစ်စေမှု အပါအဝင် ပြစ်မှုများနဲ့ စွဲချက်အတင်ခံနေရသည်။
သတ္တ၀ါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားတာလဲ ဒုက္ခရောက်ရတာပဲ… :bar:
တိန်…. အဲလိုနောက်ရဘူးလေ.. ဦးကြီးမိုက်..။ ရေထဲကငါး ဖျားမှာဆိုးလို့ မီးကင်ပေးသလို ဖြစ်နေပြီ..။
ရေထဲ က ဘဲ တွေ က သူဟာသူ အဲဒီမှာ ပျော်နေတာ ကယ်စရာမှ မလိုဘဲ မဟုတ်လား။
ကကြောင်ကြီး မှာသာ စန္ဒီ ကြောင့် မူးနေလောက်ပြီ။
သူ့ကို လဲ ကယ်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့။
ကြေးမုံဂျီး နဲ့ တွေ့သွားမယ်။
ဒါဆို ယူအက်စ်မှာ ချောင်း မြစ် ကမ်းဘေးမှာဘဲ ထိုင်ကြရုံပေါ့နော်။ သတိ ရေထဲမဆင်းရ ဥပဒေ ရှိသည်။
ကျနော့်အပြစ်ပါဗျာ… ကျနော်ရေးမိ အပြစ်ရှိသည်။ အဖဘုရားသခင် သားတော်ကို လာရောက်ခေါ်ငင်တော်မူပါ၊ နားလည်မှု ခေါင်းပါးသော ဤလောကတွင် အကျွန်မနေလိုတော့ဗျီ။ အာမင်…
ဘာအခုမှ ကြောက်ပါပြီလည်း ရေးတုန်းက ရေးပြီး
ဒီမှာလည်း အရင်ကျောင်းတက်တုန်းက ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်မဆောင်းရင် အမှုကြီးတယ် ။ တပြိုင်ထဲ ၂ မှု မြောက်တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သေကြောင်းကြံစည်မှုရယ် ၊ စည်းကမ်းမလိုက်နာတာရယ် အနည်းဆုံးတော့ သုံးသောင်းအောက်ထစ် ပေးရတယ် ။ လိုင်စင်မပါရင်တောင် အဲ့လောက်အမှုမကြီးဘူး ။ ခုတော့ ဒဏ်ငွေ လျော့သွားပါပြီ။
တည်ငြိမ်နေတဲ့ ဂေဇက်ကို မူတွေကွဲအောင် နားလည်ရခက်တဲ့ ပို့စ်တွေတင်တဲ့ ကကြောင်…
ငှက်တွေ့တိုင်းလည်း.. သေနတ်ကိုင်အမဲလိုက်နေရက်နဲ့.. ပစ်ချလို့မရဘူး..
အသိတယောက်များ.. တောထဲအလည်သွားရင်.. ငှက်တွေ့လို့.. ရှော့ဂမ်းနဲ့ပစ်ချတာ… ခဏအကြာတောထဲတင်.. .ရိန်းဂျားတွေဘွားကနဲ့ပေါ်လာပြီး.. ဖမ်းပြီး.. ဒဏ်ငွေချပါလေရော..
ဒေါ်လှပေးရတဲ့အပြင်.. နေတဲ့အယ်လ်အေမြို့ကနေ.. မိုင်၂၀၀လောက်ဝေးတဲ့နေရာက.. အဲဒီနယ်ရဲ့တရားရုံးကို.. အမှုဆိုင်ဖို့.. မနက်စောစောခေါ်တာမို့.. တော်တော့်ကိုဒုက္ခရောက်သွားဖူးတယ်..။
သြော် ဗဟုသုတရပါ၏။ မှတ်ထားဦးမှ…။
ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားက အမျိုးသမီးတဦးခမျာ ရေထဲက ဘဲရိုင်းအုပ်ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ရေစီးသန်လှတဲ့ချောင်းထဲ ခုန်ချခဲ့သည်…..
ဘဲ သားဟင်းစားချင်လို့ လားမှ မသိတာ…လေးလေးကြောင်ရာ…..
သူမ…တ်ုတစ်ချောင်း( မြန်မာပြည်ထွက်..၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ဘဲမောင်းရင်လည်း…ရတာဘဲဟာ…:)
မူးနေတာကြောင့် ကယ်မိတာ အဖတ်မတင်တဲ့အပြင် တရားစွဲတောင်
ဘဲကိုကင်ပြီး ဘီယာနဲ့မြည်းမလို့လားမသိ ဘဲမမိလည်း ငါးမိလိုမိငြား
စန္ဒီ ရဲ့ အထွေးအပွေ့ အယုအယ အောက်မှာ အတော်လေး အရူးအမူး ခံစားသွားရပုံ ရှိတယ်။
အခု တော့ ထွက်သွားပြီထင်ရဲ့။
အားလုံး အဆင်ပြေ ဘေးကင်းပါစေ။
အဲဒီနွားရူးရောက်မှာရှိတဲ့.. အလုပ်ရဲ့ရုံးခွဲက၀န်ထမ်းတယောက်တော့.. အိမ်ပျောက်သွားဟန်ရှိပါတယ်..။ အီးမေးလ်ပို့တာမှာ.. အိမ်လိပ်စာအသစ်ရမှပေးမယ်တဲ့..။ .. တော်တော်ဆိုးတဲ့..စန္ဒီ..။
ဒါပေမယ့်.. စန္ဒီ့အယုအယတွေအကြောင်း.. ရက်စက်တာတွေအကြောင်း..ဗဟုသုတ ရေးပြဖို့ကောင်းတယ်..။
ဘယ့်နှယ် ငမူးတွေ့တိုင်း ကျုပ်အမျိုးဆိုပြီးဆွဲစိနေရဒါဒုန်း
မူးနေဒယ်ဆိုပေမယ့် ငါသိဘာဒယ် အမူးပြေရင် သိပ်မမှတ်မိ တော့တာတစ်ခုထဲဘာ
မာယာများတဲ့ ကြောင်ကြီးပိုစ့်ဆိုတော့ အတော်သတိထားပြီး ဖတ်ရတယ်။
မတော် နိုင်တီနိုင်းဆန့် စတိုးဆိုင်ကြီးကလက်ဆောင်ကို ပို့ခကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ခံနဲ့ ပို့ပေးနေမှာစိုးလို့။
ရေထဲက ဘဲရိုင်းအုပ်ကို ကယ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အမျိုးသမီးက ဘဂျီးပုအမျိုးမဟုတ်ပဲ ….
ရေထဲကငါး ဖျားမှာဆိုးလို့ မီးကင်ပေးတဲ့ ကကြောင်ကြီး အမျိုးဖြစ်ရမယ်။ :harr:
ခြေနှစ်ချောင်းလဲ မကယ်နဲ့ တဲ့
အဲဒါကတော့ ဒီမှာလဲ အဲ့တိုင်းပါပဲ
စိတ်မနှံ့ တဲ့ အမျိုးသမီး ငယ်ငယ် ဖြူဖြူသန့် သန့် လေး
တို့ဒီမှာဆိုရင်ရော … အဲ့ဒီဘဲကို ဆင်းကယ်မှာလား …